Vavaka ho an'i Santa Muerte mba hiverenan'ilay olon-tiana. ? MAHERY
Vavaka ho an'i Santa Muerte hamerenan'ny malalanao. Ho afaka mahazo ny valiny amin'ny fangatahana maro momba ny fitiavana ianao.
Io olon-tiana io izay tsy namarana ny fiainanao na tsy niampita ny lalanao fotsiny dia afaka mahazo ny fitarihan'ny Fahafatesana ho avy na hitondra anao amin'ny fiainany.
Ao anatin'ireo toe-javatra izay tsy hamerenan'ny fitiavana ny olona iray dia rehefa mila ny fanampiana azontsika amin'ity vavaka mahery ity amin'ny fomba maika sy haingana ary mahomby isika.
Afaka mino ianao, tena mahery ity vavaka ity. Mivavaha amim-pinoana lehibe ary ampiasao ny herinao!
1 Inona ny vavaka ho an'i Santa Muerte momba ny fiverenan'ny olon-tiana?
2 Vavaka ho an'i Santa Muerte hamerina ilay hava-malala
4 Soso-kevitra: Vavaka ho an'i Santa Muerte hamerina ny havana
Inona ny O?mamaivay any Santa Muerte ka miverina ilay olon-tiana?
Manompo ny vavaka ho an'ny zavatra rehetra ilainao, ny fangatahana dia mety tsy ara-batana ho fanasitranana na harena fa mety ara-panahy hahatratrarana fiadanana anaty.
Amin'ity tranga ity dia ny vavaka dia natao mahazo fitiavana na ho azony atao hahazoana antsika, ny zava-dehibe dia ny fahafantarana fa ny vavaka dia mahavita ny zava-drehetra.
Ity vavaka atao amin'i Santa Muerte ity dia inoana fa nanomboka tamin'ny foko Aztec any Mexico, na izany aza dia fantatra fa hatramin'izao dia noraisina izy io noho ny heriny sy ny fahombiazany.
Santa Muerte, naman'ny vehivavy sy lehilahy mijaly, mandohalika eo an-tongotrao aho mba hilaza aminao ny alaheloko.
Mitady anao hanampy anao handresy ireo tratry ny fitiavako aho.
Manenjika ahy ny alahelo sy ny tsy fahampiana.
Mangataka aminao aho mba hihaino ny fangatahako, madio ny fahatsapako ary tsy mivadika amin'ilay olona tiako.
Mampalahelo ahy izany toe-javatra izany ary mitady fanampiana aho eo ambanin'ny lambanao masina.
Raiso ireto teny ireto ho toy ny taratry ny zava-mitranga ao am-poko.
Ny fanahiko dia reraka noho ny tsy fisian'ny (milaza ny anarany) ary mifona aminao amin'ny heriko rehetra hitondra izany eo anilako.
Fantatro fa maheno ny vavaka ataoko ianao satria avy amin'ny halalin'ny fanahiko, fantatro fa hanampy ahy ianao.
Misaotra anao aho fa ankasitrahana ireo rehetra, manome anao ny fanajako rehetra sy ny maha-olona ahy.
Mampanantena anao koa aho (mampanantena) Hotanterahiko tsy misy ahiahy.
Mamela ny olan'ny fihetseham-poko ho eo am-pelatananao aho, satria matoky tanteraka ny herinao aho, ry Santa malala mahagaga sy tsara fanahy.
Ny Santa Muerte izay mitarika an'io vavaka miavaka dia ny Santa Muerte Roja, ny fanehoana azy ara-batana dia aseho miaraka amin'ny akanjo miloko robina.
Afaka manao fangatahana mifandraika amin'ny fahatsapana, fitiavana, fifandraisana ary fihetseham-po izy.
Misy ireo manolo-kevitra ny hanao alitara mirehitra tsara miaraka amin'ny fanolorana sasany izay mety ho voankazo, voninkazo, vatomamy na toaka.
Ny vavaka ho an'i Santa Muerte hamerina ilay olon-tiana dia tsy maintsy atao eo anoloan'ity alitara ity mandritra ny fito andro ary amin'ny faran'ity fotoana ity hoe fotoana tokony hiandrasana ny fahagagana.
Azo antoka fa tsara ny valiny satria nandritra ny taona maro dia fantatra ny fijoroana ho vavolombelon'ireo mino azy.
Ankoatr'izay, ny vavaka rehetra atao amin'ny finoana dia mahery.
Mahery be izy. Mila manam-pinoana fotsiny isika.
Soso-kevitra: Vavaka ho an'i Santa Muerte hamerina ny havana
Te-hanome torohevitra tsotra aho mba hampatanjaka ny vavaka.
Labozia mena misy hazavana 7 manoloana ny sarin'i Santa Muerte. Raha mahomby ianao dia ampireheto ny labozia manoloana ny sarivongan'ny Fahafatesana Masina.
Manatera labozia ho azy. Ny labozia dia tolotra misaotra.
Azonao atao ataovy ny fampanantenanao mandritra ity fombafomba ity. Afaka manome toky fa handrehitra labozia bebe kokoa ianao na hanao karazana tolotra hafa.
Amin'izay dia ho haingana kokoa ny vavaka ataonao. Ny fanampiana ilaina rehetra dia ho azo amin'ny fomba tsotra sy matanjaka kokoa.
Raha te-hamerina ilay olona malalanao ianao dia mila mivavaka io Fahafatesana io.
Vavaka ho an'i Santa Muerte noho ny fitiavana tsy hay
Vavaka am-bavaka i Saint-Sipaniana mahery